ငါတို့သည်ငါတို့၏သည်သူငယ်အတွက်အရာ Laptop ကိုဝယ်ခြင်းသင့်တယ်? - သတင်း Rule
ငါတို့သည်ငါတို့၏သည်သူငယ်အတွက်အရာ Laptop ကိုဝယ်ခြင်းသင့်တယ်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ငါတို့သည်ငါတို့၏သည်သူငယ်အတွက်အရာ Laptop ကိုဝယ်ခြင်းသင့်တယ်?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 5th နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 09.31 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကျနော်တို့ကသူ့မွေးနေ့ကိုနဝမအဘို့ငါတို့သားမှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ် laptop ဆိုတော့စဉ်းစားနေကြတယ်. သူက Word လိုမျိုး software ကိုလိုအပ်ပေလိမ့်မည်, PowerPoint နဲ့ Excel ကိုနှင့်, နှင့်အချိန်အတွက်သူကအင်တာနက်နိုင်တဲ့ coding သို​​့ရစေခြင်းငှါ. ငါသည်လည်းသူသီးခြားမောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်ဒီတော့သူကဆိုက်ကပ်နိုင်လျှင်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်.
အဖြစ်ဝေးငါငါ့နှစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်မှပြောပြနိုင်အဖြစ် BED (ယခင်ကဗြိတိသျှပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်နည်းပညာပြရန်), အများဆုံးကျောင်းများယခုစားသုံးသူ-grade ကိုအန်းဒရွိုက် / Apple က tablet များနှင့် Windows လက်တော့ပ်ကိုသုံးပါ. သို့သော်, BED 2015 Windows ကို 2-In-1 "detach" ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပြသ, ကျွန်မအကြံပြုချင်ပါတယ်အဘယျသို့အရာဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးကလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ (ငါထလုပ်) တစ် Touch-screen ကို tablet ကိုကီးဘုတ် dock သို့ plugs ဘယ်မှာပြောင်းလဲထားတဲ့ Windows ဖြစ်ပါသည်. လူသိများတဲ့ဥပမာ Asus က T100TAF အပေါင်းတို့နှင့် Microsoft Surface ကိုထည့်သွင်း. Dual-function များကိုစာသင်ကျောင်းများအတွက်သီးခြား tablet များနှင့် laptop ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလိုတယ်, စဉ် Windows ကို App ကိုစတူဒီယို ဆရာ, ဆရာမရိုးရှင်းပြီး Windows ကိုဖန်တီးရန်အဘို့အလွယ်ကူစေသည် 10 coding မပါဘဲ apps များ.
Laptop တွေအတွက်အားနည်းနေ link ကပတ္တာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လူများကို screen ဖြင့်မိမိတို့ laptop ကိုရုပ်သိမ်းပေးရေးအားဖြင့်ပတ္တာအလေးအနက်နိုင်ပါ. မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး. Detachment အတွက်, အဆိုပါ Screen ကိုများသောအားဖြင့်ခိုင်ခံ့သောသံလိုက်အားဖြင့်လုံခြုံနေကြတယ်, နှင့်ပတ္တာအများကြီးလျော့နည်းပျက်စီးလွယ်သည်ကြည့်ရှု. တကယ်ပါပဲ, ဥပမာပု Lenovo က Miix - အချို့သောလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အဘယ်သူမျှမပတ္တာများ3နှင့်လာမည့် Dell က XPS 12 - ဒါပေမဲ့သင်အလွယ်တကူမျက်နှာပြင်ရဲ့ထောင့်မပြောင်းနိုင်ပါ.
ငါထို့ကြောင့်တစ်ဦးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပိုရှည်တဲ့အစဉ်အလာနဲ့ Laptop ထက်ကြာရှည်မျှော်လင့်င်, 360 ဒီဂရီပတ္တာတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောင်း.
Windows ကို 10 အန်းဒရွိုက်ကဲ့သို့အများအပြားတက်ဘလက် apps များရှိသည်ပါဘူး, Apple က iPad အတွက် apps များ၏မဟုတ်သလိုအရည်အသွေး, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဒေသများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်, သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခမဲ့ဆုကြေးငွေနေ. တစ်ဦးကို Windows app ကိုမျှမဖြစ်တဲ့အခါ, သင်ဆဲခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံအသုံးပွုနိုငျ (တက်ဘလက်အရည်အသွေးထက် သာ. ကောင်း၏) web browsers မ​​ျားနှင့်အစဉ်အလာကို Windows ပရိုဂရမ်များ run သန်းပေါင်းများစွာသော. လည်း, ဟုတ်ပါတယ်, Windows ကို PC တွေပေါ်မှာ Android apps များကို run ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ကဲ့သို့ BlueStacks နှင့် AmiDuOS.
ကလေးတွေအတွက် entry-level Laptop ကိုသုံး HP Stream ကတော့ဖြစ်ပါသည် 11. ဤသည်၎င်း၏နိမ့်စျေးနှုန်းအဘို့အတော်လေးအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် (£ 199.99 မှ£ 169,97), ဒါပေမယ့်တက touch screen တွင်ရှိသည်ပါဘူး, နှင့်မျက်နှာပြင်လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး.
လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အဘို့, အနီရောင် HP Pavilion X2 10-n055na £ 249,99 မှာ Detachment ငါ၏ခူးခဲ့ပြီ. ဒါဟာအဟောင်း Asus က T100TAF ထက်ပိုမိုအခဲခံစားရ, ပိုကောင်းတဲ့ကီးဘုတ်ရှိပါတယ်, တစ်လျောက်ပတ်သောမျက်နှာပြင်. သို့သော်, Asus ကပဲဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် T100HA, အဆိုပါ Pavilion X2 အပေါ်တိုးတက်ရာ 10, ကီးဘုတ်အနည်းငယ်သေးငယ်သော်လည်း.
Asus က T100HA Windows နဲ့တင်ပို့ဖို့ပထမဦးဆုံးလက်လီလက်ပ်တော့တစျဦးဖွစျသညျ 10 preinstalled, နဲ့ Windows 8.1 စက်တွေယခုဆိုင်များအနေဖြင့်ရှင်းလင်းလျက်ရှိ. PC World, ဥပမာအားဖြင့်, အဆိုပါ HP က Pavilion X2 ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ် 10 Windows နဲ့ 8.1 £ 199,97 များအတွက်, တစ်ဦးကို Windows လျှင်ဒါငါအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ 10 ဗားရှင်းမကြာမီပေါ်လာသည်.
ငါယခင်က Acer ကပြောင်းလဲမည်လျစ်လျူရှုင့် 10 နှင့် 11 သူတို့ကပိုကုန်ကျသောကွောငျ့ - များသောအားဖြင့်£ 300 £ 350 - ပေမယ့် switch 10E £ 229,95 ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်. ငါသည်လည်းလျစ်လျူရှုထားခဲ့ဖူးတဲ့ Toshiba ကဂြိုဟ်တု Mini ကိုနှိပ်ပါ, ငါ 8.9in screen ကိုသေးငယ်လွန်းသည်ထင်သောကြောင့်,. သို့သော် Windows ကို magnification setting ကိုလုံလောက်တဲ့မြင့်မြင့်တတ်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ကလေးတစ်ဦးအဘို့အသေးငယ်လွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး. သင်တစ်ဦးယောဟန်သည် Lewis ကစတိုးဆိုင်တစ်ခု Asus က T100HA နှင့်အတူဤစက်နှစ်မျိုးလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်မည်အကြောင်း, နှင့်ယောဟန် Lewis ကတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်အရွယ်အာမခံချက်လည်းပါဝင်သည်.
ဤသူ Entry-level ကိုအားလုံးသည် Two-In-သူမြားကိုအဓိကမှတ်ဉာဏ်၏ Atom-based ပရိုဆက်ဆာနှင့် 2GB ရှိ, တစ် 32GB eMMC Flash ကိုမှတ်ဉာဏ် chip ကိုအတူသိုလှောင်မှုပမာဏများကို. သူတို့ကသိသာမှတ်ဉာဏ်၏ 4GB နှင့်သိုလှောင်မှု 64GB နှင့်အတူပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောစက်တွေကိုရှာဖွေခက်ခဲရှိပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးကုန်ကျ. အဆိုပါအမြန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အပို 32GB add ကာ microSD card ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသိုလှောင်မှု. သငျသညျကို Windows နှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦး-In-One ကိုဝယ်လျှင် 8.1 နဲ့ Windows က upgrade 10, ပထမဦးဆုံးကတ် add: ငါအဆင့်မြှင့်သည့် 32GB စက်တွေထဲကတစ်ခုတပ်ဆင်ပြီးစီးဖို့လုံလောက်တဲ့နေရာလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူး.
ငါ£ 250 ကိုသင်ကလေးတစ်ဦးတစ်လက်ပ်တော့အပေါ်ဖြုန်းဖို့လိုအရှိဆုံးကြောင်းယူဆတာပါ. သငျသညျလျော့နည်းဖြုန်းဖို့လိုပါလျှင်, တစ်ဦးကို cut-စျေးနှုန်းရှာ Lenovo က Miix 3. သုံးလအကြာ, ငါ£ 150 အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဝယ်ယူခဲ့, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မယ့်အစားတစ်ဦး£ 250 Asus က T100HA ရချင်ပါတယ်.
အများစုဟာ laptop တွေတဲ့ "စကွဝဠာ" docking station နဲ့အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Plugable UD-3900, ငါမူကားသင်တဦးတည်းလိုအပ်ပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး. အများစုဟာ laptop တွေသင်တစ်ဦး docking station ကို အသုံးပြု. မရှိဘဲပြင်ပကို USB သို့မဟုတ် Bluetooth ကီးဘုတ်အတွက် plug စေမည်. များများရှိပါတယ် ကလေးတွေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းရောင်စုံ Keyboard ကို, နှင့်များပြားလှသော Touch-စာရိုက်လဲ tutorial.
သို့သော်, ထို Asus က T100HA သစ်တစ်ခုရှိပါတယ် မှာ USB Type C, port ကို, ဒါကြောင့်သင်ကသေးငယ်တဲ့ adapter တွေလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏သားရဲ့လက်ပ်တော့အဘို့စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ယူဆ, သူ့ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ပေး ကလေးကအကောငျ့ကို. ဒါဟာသင်အချိန်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမသင့်လျော်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ, ဂိမ်းမဘို့ရာခန့်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်, နှင့်ငွေဘယ်လောက်သတ်မှတ် (ရှိလျှင်) သူကအွန်လိုင်းသုံးဖြုန်းနိုင်. သင့်ထံမှအဝေးကနေအဲဒီ settings တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည် account.microsoft.com/family.
Windows ကို 8.1 နှင့် 10 သင်သည်သင်၏သားရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုအပတ်စဉ်စံချိန်အီးမေးလ်ပို့ပါလိမ့်မယ်: သူသညျမိမိကို PC ကိုအသုံးပြုမယ့်နာရီမည်မျှ, သူသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, မိမိအကြိုက်ဆုံး apps များအတွက်သုံးစွဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံး. ဒါကြောင့် optional ကိုဖြစ်ပါသည် - - သင်သည်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါပေမယ့်အဲဒါကို default အားဖြင့်ဖွင့်ဖွင့်.
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စီးပွားဖြစ်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် ကို Magic Desktop ပေါ်မှာ, ဒါပေမယ့်အငယ်လေးတွေတကယ်ကိုရဲ့.
သငျသညျအခြိနျမှနျမှ laptop ကိုမှပေါ် log သင့်တယ်, သင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်ကို အသုံးပြု., အရာအားလုံး OK ကိုကြောင်းစစျဆေးဖို့. ကလေးသူငယ်အကောင့်အသစ်များ၏တော်တော်လုံခြုံစွာ, နဲ့ Windows 10 အလိုအလျှောက် update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမှုအရာတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူး, နှင့်အပို Anti-virus စစ်ဆေးမှုများကို run.
စာရွက်စာတမ်းများကိုကယ်တင်သင်၏သားကိုအားပေးပါ, မိမိအကို Microsoft အကောင့်ရဲ့အခမဲ့ OneDrive အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုမှဓါတ်ပုံများနှင့်အခြားဖိုင်များကို, နှင့် / သို့မဟုတ် SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်. သငျသညျယာယီက back up လုပ်ထားဖို့နှင့်ဓာတ်ပုံများထည့်သွင်းဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင် PC ကိုမှကဒ်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်, အကြိုက်ဆုံးဂီတဖိုင်များကို, YouTube ဗီဒီယိုများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာ.
OneDrive ရှိ Microsoft Office ကိုအစီအစဉ်များကိုအခမဲ့ဗားရှင်းရှိပါတယ်, သင်က Windows Store မှအချို့သောအဖြစ်အခမဲ့ app များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်. ငါက9နှစ်အရွယ်များအတွက်အပြည့်အဝ desktop ကိုအစီအစဉ်များကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ် install လုပ်ရကျိုးနပ်မယ့်စဉ်းစားကြဘူး, သင့်ထံ၌စာရင်းသွင်းကြမဟုတ်လျှင် ရုံး 365 နေအိမ်. ဤသည် PC များအပေါ်လူငါးဦးအဘို့အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေး Office suite မှာ, Macs, tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများ, အသီးအသီး user အတွက်သိုလှောင်မှုအပေါင်းတစ် terabytes, £ 79,99 တစ်နှစ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, LibreOffice အခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်.
သင်သည်လည်း pre-install လုပ်နိုင်တယ်လို့ Minecraft program တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအဖြစ် app ကို, ထို ကုတ်ခြစ်ရာ programming ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို - မှာကြည့် Scratch နှင့်အတူစတင် ပထမဦးဆုံး - နှင့် Khan ကအကယ်ဒမီ. သင်က Taskbar ပေါ်ကဤနှင့်အခြားအစီအစဉ်များကို pin နိုင်ပါ, ဒါမှမဟုတ် Desktop ပေါ်မှာ icon တွေကိုထည့်သွင်း, ရှာတွေ့မှသူတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်.
35911	1 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, computing, အင်္ဂါရပ်များ, ဂျက် Schofield, laptop များ
← Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ် (2015) [VIDEO] သင့်ရဲ့ပစ္စည်းများမျက်မမြင်ကိုသင်ဖြစ်၏န, ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်! →